Imicimbi ephezulu yeveki kwiAmazon-Juni 2017 | Iindaba zeGajethi
Sikho geek, siyayithanda itekhnoloji kwaye ke ngoko izinto zombane zabathengi. Kungenxa yoko le nto sihlala silumkile kulo naluphi na uhlobo lonikezo lomdla olunokuthi luvele mihla le. Nangona kunjalo, sinombono ongcono kakhulu, siza kukuzisela izithembiso zeveki ongafanele uziphose, kuba uya kuba nomxholo we-elektroniki kunye nezixhobo kumaxabiso angenakubethwa.
Lo nto, hlala nathi kwaye ufumanise ukuba zeziphi izibonelelo ezinomdla kakhulu kwiveki ephelileyo kaJuni (ukusuka ngoJuni 26 ukuya kuJulayi 3) kwaye uthathe ithuba lokutshintsha umabonwakude, ufumane iselfowuni entsha ...
Esi sithuba siza kuhlala sihlaziywa mihla le, ke siyacebisa ukuba ubuye uzokujonga ukuba yintoni umnikelo omtsha wosuku olo kuthethwa ngalo.
1 Iidili zeAmazon (ngoJuni 26-Julayi 3)
2 Iiyuro ezintlanu zeZipho eAmazon zithenga iivawutsha zesipho
Iidili zeAmazon (ngoJuni 26-Julayi 3)
Fumana izipho ezixabisa i- € 150 ngokuthenga iimveliso zeCanon ezifakwe kolu khetho: LINK
LG 49 intshi yeTV (I-4K, IPS) ye- € 766 nge ukuhambisa ngenqanawa ngosuku olunye
I-motorla moto g4 kunyeUshicilelo olukhethekileyo lweAmazon nge- € 179,99 nje (ixabiso elidala le- € 199,99, libonelela kude kube nge-27 kaJuni).
I-JVC HA-EBTS kwii-headphone ezisezindlebeni ukusuka kwi- € 29,90, isaphulelo sama-38% sexabiso laso ngesiqhelo ngoJuni 26.
I-32 intshi ye-LG Monitor Monitor ukusuka kwi- € 368,18, ngesaphulelo se-18% kude kube ngoJulayi 2
Akukho mveliso ifunyenweyo nge- € 21,99 kuphela, ukwehla kwexabiso nge-45% kude kube nge-26 kaJuni
Iiyuro ezintlanu zeZipho eAmazon zithenga iivawutsha zesipho
Unikezelo oluhle lweAmazon lubuyile apho siya kuthi sifumane i- € 5 njengesipho xa uthenga okungenani i-25 euros ngetsheki izipho. Unokuya kufumana amakhadi akho ezipho koku kulandelayo LINK. Khumbula ukuba le ntengiso iya kufumaneka kude kube nguJuni 30, ke ngekhe ube neentsuku ezininzi zokuwasebenzisa. Kuyinto emnandi kwaye yenye yezona zilindelwe ngabathengi baseAmazon abaqhelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imicimbi ephezulu yeveki kwiAmazon-Juni 2017
UAraceli Guardia sitsho
Wow, loo intshi ye-49-intshi ye-LG iya kuba yeyam! Ndiyayithanda indlela isisombululo se-4K esijongeka ngakumbi kwipaneli ye-IPS
Phendula uAraceli Guardia
indlela entle ngayo woooo bayandothusa
Ityhile iinkcukacha zokuqala ze-Samsung Galaxy Note 8